Dhaawacyada Injineerada Turkiga ee Qaraxii Afgooye oo saaka loo qaaday Ankara | Jowhar Somali news Leader
Home News Dhaawacyada Injineerada Turkiga ee Qaraxii Afgooye oo saaka loo qaaday Ankara
Dhaawacyada 9 ruux oo 3 ka mid ah ay yihiin Engineero Turki ah oo ku dhaawacmay qaraxii maalin ka hor ka dhacay agagaarka degmada Afgooye ayaa saaka loo qaaday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, si Isbitaalada halkaas ku yaalla loogu daweeyo.
Diyaarad kuwa caafimaadka ee ay leeyihiin Milateriga dalka Turkiga oo saaka soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa qaaday dhaawacyada 9-ka ruux oo uu ku jiro Taliye kuxigeenka Ciidamada Booliska Haramcad oo lagu magacaabo Fanax.
Sidoo kale waxaa ku jira dhaawacyada dad kale oo rayid ah, kuwaasoo iyana ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ee lala eegtay Shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Shirkadda dhiseysa wadadaas ee laga leeyahay Turkiga ayaa muddooyinkii u dambeeyay la kulmeysay weeraro uga imaanayay Al-Shabaab, waxaana weerarada isugu jireen qaraxyo miino wadada la geliyay iyo weeraro qaraxyo baabuur lagu soo raray.
Dhismaha Wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo meel gabogabo maraya ayaa hakad ku yimid, kaddib markii ay kordheen weerarada, waxaana la sheegay in qeyb ka mid ah qalabkii lagu dhisayay wadadaas lagala soo baxay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaaleyso ammaanka shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, inkastoo sanadkii la soo dhaafay labo Engineer Turkish ah lagu dilay qaraxii xoogganaa ee ka dhacay Ex Koontarool Afgooye.